၂၀၁၀ ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ၂၀၁၁ ကို ကြိုဆိုခြင်း | စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ
၂၀၁၀ ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ၂၀၁၁ ကို ကြိုဆိုခြင်း
၂၀၁၀ ကတော့ ကုန်သွားပြန်ပြီ…..၂၀၁၀ပြီးတော့ ၂၀၁၁ ပေါ့။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့  ၂၀၁၀က ဘယ်လိုလဲ။ ငါ့အတွက်ကတော့ ၂၀၁၀ က ကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်စရာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့သလို ၀မ်းနည်း ပူဆွေးမှုတွေလည်း ရှိခဲ့တာပေါ့။ နှစ်တွေကတော့ ပြောင်းပြီးရင်း ပြောင်းနေတာပဲနော်။ ပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့ အမှန်တရားကြီးရှိနေတဲ့ ဒီလောကကြီးထဲမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရင်း ပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်းကို သင်ယူရင်း ပြောင်းလဲနေတဲ့ ငါတို့တွေ ရှေ့ ဆက်ပြီးတော့လည်း ပြောင်းလဲနေရဦးမယ်နော်။
ကဲ ၂၀၁၀ ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင်။ ငါအတွက်ကတော့ ၂၀၁၀က အေးချမ်းသာယာတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။ ငါလမ်းတွေ အများကြီး လျောက်ခဲ့တယ်။ လမ်းတွေလည်း အများကြီး မှားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ခရီးဆုံးအောင် အထိတော့ ငါလျောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းတိုတွေလည်း ဖောက်ခဲ့ သလို လမ်းရှည်တွေကိုလည်း ဖောက်လုပ်နေဆဲပါပဲ။ ဖောက်လုပ်ဆဲ လမ်းတွေကိုတော့ ရှေ့ ဆက်ပြီး ၂၀၁၁ ထဲမှာ ဆက်ပြီး ဖောက်သွားမယ်။ ပြီးတော့ ကို ဖောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းတိုတွေကိုလည်း ဆက်ပြီးတော့ ပြုပြင်သွားမယ်။ ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ်ပဲဖောက်ရမယ် မဟုတ်လား။ လမ်းမှားနေ လွဲနေတယ် ဆိုရင်လည်း ပြုပြင်သွန်သေးပေးကြပါလို့ သူငယ်ချင်းတို့ကို တောင်းဆိုပါတယ်။
၂၀၁၀ ကတော့ ပြီးဆုံးသွားပေမယ့်…သူငယ်ချင်းတို့နဲ့ ငါ့ရဲ့ ခင်မင်မှုတွေက ၂၀၁၁ ထိဆက်လက်ရှင်သန်နေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ကရှည်ကြာခဲ့သလို ၂၀၁၁ ကလည်း ၁နှစ်တာရှည်ကြာဦးမယ်ဆိုပေမယ့် ငါတို့တွေ ခင်မင်မှုတွေနဲ့ ရှေ့ ဆက်သွားကြရအောင်ပါ။
၂၀၁၁ ကိုကြိုဆိုရအောင်။ ၂၀၁၁ က ငါ့အတွက်တော့ နောင်အနာဂတ်အိပ်မက်တွေကို အစပျိုးရမယ့် နှစ်တစ်နှစ်ပဲ။ ပြင်ဆင်မှုတွေ၊ ပြောင်းလဲမှုတွေ ကြုံတွေ့ ရမယ့်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်မယ်။ ၂၀၁၁က ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေနဲ့ ငါ့ အနာဂတ်က လမ်းတွေကို ပြင်ဆင်သွားရမယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း အမျိုးမျိုးအကြံတွေ ရှိကြမယ်လို့ယုံကြည်ပြီး သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ သူငယ်ချင်းတို့လို သူငယ်ချင်းမျိုး ငါ့မှာ ရှိနေတာက ငါ့အတွက် ဂုဏ်အယူရဆုံးပါပဲ။
နှစ်သစ်မှာ အားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ ကြပါစေ။
This entry was posted on Saturday, January 1st, 2011 at 12:51 am	and posted in ကျွန်တော်နှင့်.., ရောက်တက်ရာရာ.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
One response to “၂၀၁၀ ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ၂၀၁၁ ကို ကြိုဆိုခြင်း”
U2, ko kaung gyi